Nhau - Chenguang biological pepper dhizaini chirongwa chakahwina China Industrial Award
Musi waZvita 27, iyo China Federation yeindasitiri yezvehupfumi yakabata Musangano weChitanhatu weChina Maindasitiri Emabhizimusi muBeijing. Makambani makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemapurojekiti akahwina muChina Maindasitiri mibairo, kurumbidza mibairo uye kudoma mibairo zvichiteerana. Chenguang biotechnology yeboka "Pepper yekudyara tekinoroji uye michina utsva uye maindasitiri chirongwa" yakahwina yekurumbidza mubairo.
Capsicum yakaburitsa zvigadzirwa zvinonyanya kuve capsanthin uye capsaicin, ayo anoshandiswa zvakanyanya mukudya, mishonga uye mimwe minda, uye ndizvo zvinodiwa zvehupenyu hwazvino. Muma1950, United States yakatungamira mukutora Capsanthin kubva mhiripiri, zvichitungamira indasitiri. Gare gare, iyo indasitiri yakatongwa neUnited States, Spain neIndia. China yakangopinda muindasitiri yekubvisa mhiripiri muma1980, iine kutanga kunonoka, tekinoroji yekugadzira kumashure uye isina kukwana kubuda. Kunyangwe iri nyika hombe ine zviwanikwa zve mhiripiri, zvigadzirwa zvayo zvinoda kuunzwa kunze kwenyika.
Chenguang biology yakapinda muindasitiri yekuchera mhiripiri muna 2000. Yakakunda huwandu hwekugadzirisa matekinoroji, senge mhiripiri inogadziriswa nemubato, yakasanganiswa inoenderera mberi inopesana neyekutsikisa gradient, kupatsanurana kwematanho, uye yakavaka yekutanga muhombe uye inoramba ichienderera mhiripiri. yekugadzira mutsara muChina. Simba rayo rekugadzira rakagadziridzwa zvakanyanya. Kubudikidza nekuenderera nekuvandudzika uye nehunyanzvi, parizvino, imwechete yekugadzira tambo inoitisa matani zana nemazana ezvigadzirwa pazuva, mazana ezviuru zvakapetwa kupfuura zvakapfuura Kugadzirwa kwesimba kwakazara kwemazuva zana kunogona kusangana nezvinodiwa pasirese. Capsaicin uye capsaicin zvakatorwa panguva imwe chete. Goho re capsaicin rakawedzera kubva pa 35% kusvika pa 95% nepo goho re capsaicin rakawedzera ne 4 kana 5 muzana poindi kusvika 98%. Kurasikirwa kwega kwega kwetani yezvinhu zvakasvibirira kwakadzikiswa kubva pamazana matatu makirogiramu kusvika pasi pemakirogiramu matatu nekusanganisa kwakapindirana kwekuenderera kwakashata kwekumanikidza kwemwenje. Iyo indasitiri tekinoroji yekukwirira kuchena capsaicin kristaro, supercritical kudhiza kwe capsicum tsvuku pigment, capsicum red pigment uye capsaicin microemulsion yakagadziriswa muChina.
Chenguang kutsvagurudza kwehupenyu kwakawana masosi ekushatisa nemitemo yekutama yekutsvagisa zvinhu zvinokuvadza mu mhiripiri uye zvigadzirwa zvayo, zvakagadzira nekuvandudza tekinoroji yekubvisa yeSudan tsvuku, Rhodamine B uye organophosphorus mishonga yekuuraya zvipuka muzvigadzirwa, yakasimbisa mhando uye chengetedzo sisitimu yeiyo kuita kwese mhiripiri kubva pakudyara, kukohwa, kuchengetedza uye kutakura kusvika mukugadzirisa, uye nekugadzira zviyero zvemunyika zvezvinhu zvakakosha mbishi, zvigadzirwa uye nzira dzekutsvaga. Iyo chigadzirwa chigadzirwa chinogutsa Sangana neyepasi rose-yekupedzisira musika kudiwa, mune yepasi rose inotungamira chinzvimbo.
Munguva yekuitwa kwepepuru yekuchera matekinoroji uye michina yekuvandudza uye yekuvandudza purojekiti, makumi matatu neshanu ekugadzira patent uye mashanu matsva ekushandisa akawanikwa. Nekombinoroji yemhando yepamusoro, zvishandiso uye kugadzirwa kwemaindasitiri, chikamu chemusika checapsicum tsvuku, icho chakazvimiririra chakagadzirwa muChina, chakawedzera kubva pasi pe2% kusvika pamusoro pe80% mumusika wepasi rose (Chenguang biology account ye60%), uye capsaicin ine yakawedzera kubva pa0.2% kusvika pa50% (Chenguang biology inosvika 40%), izvo zvakakunda China kodzero yekutaura mumusika wepasi rose weindasitiri yekubvisa mhiripiri.
China Mubairo weindasitiri ndiwo mubairo wepamusoro-soro muindasitiri yeChina yakatenderwa neHurumende yeKanzuru. Inosarudzwa makore maviri ega ega kumisikidza akati wandei emabhizimusi ekuenzanisa mabhenji uye mapurojekiti uye kutyaira kuumbwa kwenhamba huru yemabhizinesi ane makwikwi emakwikwi.